Kooha, एक सहज र सरल तरीका मा तपाइँको स्क्रीन रेकर्ड | Ubunlog
Kooha, एक सहज र सरल तरीका मा तपाइँको स्क्रीन रेकर्ड गर्नुहोस्
अर्को लेख मा हामी Kooha मा एक नजर राख्ने छौं। यो हो एक साधारण GTK- आधारित स्क्रीन रेकर्डि application आवेदन, जसको साथ तपाइँ डेस्कटप र माइक्रोफोन बाट स्क्रीन र अडियो रेकर्ड गर्न सक्नुहुन्छ। यो जीनोम, Wayland र X11 वातावरण मा काम गर्दछ। यसको रूप देखि, Kooha GNOME को थोरै ज्ञात, देशी रेकर्डि system प्रणाली को उपयोग गर्दछ, जटिल सेटअप को लागी वा त्यस्तै केहि को लागी बिना स्क्रीन रेकर्ड गर्न सक्षम हुन को लागी। यो भनिएको छ कि यो एक आवेदन हो कि अझै पनी विकास को एक प्रारम्भिक चरण मा छ।
यो अनुप्रयोग एक आधारभूत विजेट जस्तै प्रयोगकर्ता इन्टरफेस को उपयोग गर्दछ, सजीलो चिह्न बुझ्न संग। तपाइँ एक कस्टम ढिलाइ काउन्टर जोड्नु भन्दा पहिले तपाइँ रेकर्डि start सुरु गर्न को लागी अनुमति दिन्छ, एक साधारण काउन्टर, एक स्टप बटन संग, स्क्रीन मा प्रदर्शित गरिनेछ। यो यति सरल छ।
1 Kooha सामान्य विशेषताहरु
2 Gnome संग Ubuntu मा Kooha स्थापना गर्नुहोस्
3 स्थापना रद्द गर्नुहोस्
Kooha सामान्य विशेषताहरु
यो कार्यक्रम एक हो नि: शुल्क र खुला स्रोत स्क्रीन रेकर्डर कि हामी जीएनयू / लिनक्स प्रणाली मा उपलब्ध छ.
यो हो GTK र PyGObject संग निर्मित। वास्तव मा, यो GNOME को निर्मित स्क्रीन रेकर्डर को रूप मा उस्तै ब्याकएन्ड को उपयोग गर्दछ।
Kooha छ न्यूनतम इन्टरफेस संग एक साधारण स्क्रीन रिकर्डर। तपाइँ मात्र सेटिंग्स को एक धेरै संग फिडल बिना रेकर्ड बटन क्लिक गर्नु पर्छ। यो मानिन्छ कि यसको इन्टरफेस संग, यो असम्भव भ्रमित गर्न को लागी बनाउँछ।
विकल्पहरु मा, केवल एक चीज हामी कन्फिगर गर्न सक्छौं ढिलाइ समय तेसैले कि हामी समय को लागी आवेदन र ढाँचा जसमा हामी यसलाई बचाउनेछौं। यसले मात्र हामीलाई अनुमति दिनेछ MKV वा WebM बीच छनौट गर्नुहोस्.
यसको इन्टरफेस मा हामी छवटा बटन भेट्टाउनेछौं। छनौट गर्न को लागी एक पूर्ण स्क्रीन रेकर्ड गर्नुहोस्, अर्को हामीलाई सम्भावना दिन्छ एक आयताकार क्षेत्र उत्कीर्ण। तल मात्र हामी छनौट गर्न सक्छौं रेकर्ड प्रणाली ध्वनि, माइक्रोफोन, र सूचक प्रदर्शन। उपलब्ध अन्तिम बटन एक रेकर्डि start सुरु गर्न प्रेस गर्न को लागी हुनेछ।
साथै कार्यक्रम केहि कीबोर्ड सर्टकट समर्थन गर्दछ.
अर्को संभावना छ कि तपाइँ हामीलाई प्रस्ताव गर्न जाँदै हुनुहुन्छ5वा 10 सेकेन्ड ढिलाइ रेकर्डि। सुरु हुनु भन्दा पहिले प्रयोग गर्नुहोस्.
रेकर्ड गर्दा, काउन्टर स्क्रिनमा देखिने बनी रहन्छ र रेकर्डि in मा समावेश छ। यो एक समस्या हुन सक्छ जब रेकर्डि। जे होस् मलाई लाग्छ त्यहाँ यसलाई कम गर्न को लागी तरिकाहरु छन्.
हामी गर्न सक्छौं हाम्रो रेकर्डि save सुरक्षित गर्न को लागी एक स्थान छान्नुहोस्.
समर्थन गर्दछ बहु भाषाहरू.
यी यस कार्यक्रमको केहि सुविधाहरू हुन्। तिनीहरूले गर्न सक्छन् मा विस्तृत ती सबै परामर्श परियोजना GitHub पृष्ठ.
Gnome संग Ubuntu मा Kooha स्थापना गर्नुहोस्
यो कार्यक्रम हुन सक्छ को उपयोग गरेर धेरै सजीलै स्थापना गर्नुहोस् फ्ल्याटप्याक प्याकेज संवाददाता। यदि तपाइँ Ubuntu 20.04 को उपयोग गरीरहनु भएको छ र तपाइँ अझै पनी यो प्रविधि तपाइँको प्रणाली मा सक्षम छैन, तपाइँ जारी राख्न सक्नुहुन्छ गाईड कि एक सहकर्मीले यो ब्लगमा केहि समय अघि यस बारेमा लेख्यो।
जब तपाइँ तपाइँको अपरेटि system्ग सिस्टम मा प्याकेजहरु को यी प्रकार को स्थापना गर्न सक्नुहुन्छ, तपाइँ मात्र एक टर्मिनल (Ctrl + Alt + T) खोल्न र त्यसमा निम्न कार्यान्वयन गर्न को लागी आवश्यक पर्दछ। आदेश स्थापना गर्नुहोस्:
एक पटक प्रक्रिया समाप्त भयो र कार्यक्रम पहिले नै हाम्रो कम्प्यूटर मा स्थापित छ, सबै बाँकी छ कार्यक्रम लन्चर खोज्नुहोस् वा टर्मिनल मा चलाउनुहोस्:
यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने प्रणाली बाट यो रेकर्डर हटाउनुहोस्, तपाइँ मात्र एक टर्मिनल (Ctrl + Alt + T) खोल्न र यसलाई आदेश लेख्न आवश्यक छ:
छोटो मा, यो यू होएक देशी GNU / लिनक्स स्क्रिन रेकर्डि application अनुप्रयोग हो कि मन मा सादगी र दक्षता संग डिजाइन गरीएको छ। समय संगै, यो ब्लग धेरै कार्यक्रमहरु जसको साथ को बारे मा कुरा गरीएको छ एक स्क्रीन रेकर्डि make बनाउन Ubuntu मा। त्यसोभए हामी स्क्रीन रेकर्डर को एक रोचक सूची, जो हामी Kooha जोड्दै छन्। तेसैले जो कोहीलाई यसको आवश्यकता छ, उनीहरुको आवश्यकताहरु अनुरूप आवेदन पाउन सक्छन्।
यस कार्यक्रम र यसको उपयोग को बारे मा अधिक जानकारी बाट प्राप्त गर्न सकिन्छ GitHub मा भण्डार परियोजना को.
लेखको पूर्ण मार्ग: ubunlog » Ubuntu » Kooha, एक सहज र सरल तरीका मा तपाइँको स्क्रीन रेकर्ड गर्नुहोस्
क्रोम X11 प्रणाली मा ओजोन तह प्रयोग गर्न सारियो
लिनक्स 5.14 रास्पबेरी पाई 400, USB अडियो विलम्बता, exFAT समर्थन, र धेरै को लागी समर्थन सुधार गर्न आइपुगेको छ।